“Madaxdeena ma shaqeynayaan, wax laga shakiyo ayaa socda, wax jawaab ahna waan weynay..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Madaxdeena ma shaqeynayaan, wax laga shakiyo ayaa socda, wax jawaab ahna waan weynay..”
Mid ka mid ah askartii Kenyaanka ee ka bad-baaday weerar ay dagaalyahanadda Al-shabaab shalay ku qaadeen xero ciidan oo ku taala deegaanka Kulbiyow ee gobolka J/hoose ayaa si aan caadi ahayn u kashifay sidii ay wax u dhaceen, isagoona eedeeyn dusha kala dhacay saraakhiisha sare ee ciidamada Kenya.
Wareeysi uu askarigaan siiyay wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayuu ku sheegay in qorshaha weerarkii Al-shabaab ee Kulbiyow si fiican looga war haayay, balse aan laga hortagin.
Wuxuu sheegay in Al-shabaab ay doonayeen inay u dabaal degaan sanad-guuradii koowaad ee kasoo wareegtay weerarkii Ceel-cadde, kaas oo lagu laayahay boqolaal askar oo ka tirsanaa ciidamada Kenya.
“Waa laga war-haayay dagaalka Al-shabaab ee Kulbiyow, waana la iska dhago tiray, markii xogta loo diray madaxda ciidamada, cid uun ayaa dib u dhigtay go’aan qaadashahiis, madaxdeena ma shaqeynayaan, wax laga shakiyo ayaa socda, wax jawaab ahna waan weynay” Sidaas waxaa yiri askariga Kenyaanka ee kasoo bad-baaday weerarkii ay Al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan ee ku yaala deegaanka Kulbiyow ee gobolka J/hoose.
Sidoo kale, askarigaan ayaa tilmaamay in ciidamada Kenya aysan lahayn saraakiil daacad ah, wuxuuna su’aalo badan ka keenay qalabka ay heysteen ciidamadaas, oo uu sheegay inay yihiin duug ah oo aanay xaaladiisu fiicneyn.
Dagaalyahanada Al-shabaab ayuu sheegay inay yihiin kuwa khibrad badan oo si weyn u hubeysan, islamarkaana ay weerarada qaadaan habeenkii, wuxuuna weerarkii Kulbiyow dhacay xilli ay ciidamada qaarkood hurdayeen.
Askarigan ka baxsaday xerada Kulbiyow oo magaciisa loo qariyay xaalad amni awgeed ayaa sidoo kale dhaliilay saraakiisha shaqada laga ceyriyo ee ciidamada Kenya, kuwaas oo uu ku tilmaamay kuwii khibrada lahaa oo muddo 10 sano ka badanna ciidamada kusoo dhex jiray, wuxuuna sheegay inay wanaagsan tahay in la isweydiiyo meesha ay saraakiisha ku dambeyn karaan.
Dhinaca kale, saraakiisha ciidanka Kenya iyo kuwa Al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay deegaanka Kulbiyow ee gobolka J/hoose.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in weerarkaasi looga dilay dilay 9 askari oo laba ka mid ah ay saraakiil yihiin, halka looga dhaawacay 15 kale.
Ugu dambeyntii, dhinaca Al-shabaab ayaa iyagana sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 57 askari, halka tiro 100 ka badan ay ka dhaawaceen waa sida ay Shabaabka hadalka u dhigeene.